Mid ka mid ah shantii qof ee Ingiriiska ah ayaa ka shaqayn doona lulataanta haddii mushaharku sax yahay oo shaqadu ammaan tahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Mid ka mid ah shantii qof ee Ingiriiska ah ayaa ka shaqayn doona lulataanta haddii mushaharku sax yahay oo shaqadu ammaan tahay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Wararka Fashion • Films • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • Music • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Qabsashada caanka ah ee dariiqa xirfadda mar loo tixgeliyo inay tahay xaaraan adag ayaa kaliya ku korodhay boodbooyin iyo soohdimo, ku qulqulaya akadeemiyadda dadka waaweyn iyo abuurista wicitaanno loogu talagalay abuurista “lebbiska heerka gelitaanka” ee dhallinta.
Dhallinyaradu waxay u badan tahay inay tixgeliyaan inay galaan warshadaha lulataanta, halka kaliya 8% kuwa ka weyn 55 ay tixgeliyeen beddelaad noocan oo kale ah.
In ka badan saddex meelood meel (34%) ayaa la daawaday lulataaye, mar loo tixgeliyey inay tahay wax laga xumaado, sida "qayb la aqbali karo ee bulshada casriga ah."
Ra'yi ururin cusub ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad ​​20% dadka reer Britain ay geli doonaan xirfadda qaawan, illaa inta magdhowga maaliyadeed uu aad u sarreeyo oo jawiga shaqadu uu ammaan yahay.
19% dadka waaweyn ee Ingiriiska ah oo sheegaya inay ka fikirayaan inay ka shaqeeyaan warshadaha lulataaye waxay soo jeedinayaan in shaqada galmada ay noqotay qayb "la aqbali karo" oo bulshada ka mid ah.
Marka loo eego natiijooyinka ra'yiururinta, 34% dadka waaweyn ee Ingiriiska ah waxay arkeen porno, mar loo tixgeliyey inay tahay wax laga xishoodo, oo ah "qayb la aqbali karo ee bulshada casriga ah."
Sida muuqata, dhallinyarada qaangaarka ah waxay u badan tahay inay ka fikiraan gelitaanka dugsiga lulataaye warshadaha - 32% dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 34 ayaa ka fikiray - halka kaliya 8% kuwa ka weyn 55 ay tixgeliyeen beddel xirfadeed.
In kasta oo ay muuqato dabeecado furan oo ku wajahan warshadaha, in kasta oo, inyar ka badan kala bar (51%) jawaabeyaasha ra'yiururintu ay qireen inay ka walaacsan yihiin haddii ay ogaadaan in qof qaangaar ah oo qoyska ka mid ah uu soo saarayo waxyaabo lagu iibiyo goobaha sida Pornhub ama OnlyFans.
Kuwa ka yar 35, kaliya 41% ayaa sheegay inay u badan tahay inay ka walwalsan yihiin natiijada noocaas ah, halka 59% kuwa ka weyn 55 ay u arki doonaan inay sababto walaac.
Sahaminta 2,087 dadka waaweyn ee Ingiriiska ah waxaa wakiishay hay'ad samafal oo ka hortagga filimada Mashruuca Runta Qaawan, taas oo loogu yeero natiijooyinka codbixinta mid dhib badan, iyadoo la xusuusto in kordhinta wacyiga ku saabsan inta badan “jilayaasha” qaawan ee la tahriibiyo oo laga faa’idaysto rabitaankooda uma muuqato inay u turjumayaan dadka iska fogeeya warshadaha.
"Waxaa jira dad da 'walba leh oo si joogto ah u galaya waxyaabaha cad-waxyaabaha ku jira oo leh saameyn la taaban karo oo waxyeello leh xiriirka, caafimaadka maskaxda iyo is-qiimeynta daawadayaasha iyo kuwa ka shaqeeya warshadaha labadaba," Mashruuca Runta Qaawan aasaasaha, Ian Henderson, ayaa yiri, isagoo sharraxaya baaxadda qaawan ee xitaa inta nolosha caadiga ah.
Qaabilaadda caanka ah ee dariiqa xirfadda mar loo tixgeliyo inay tahay xaaraan adag ayaa kaliya ku korodhay boodbooyin iyo soohdimo, ku qulqulaya akadeemiyadda dadka waaweyn iyo abuurista wicitaanno loogu talagalay abuurista “lebbiska heerka gelitaanka” ee dhallinta.
Halka goobaha ugu caansan ee martigeliya qaawan wax-laga bilaabo shabakadda MindGeek ee warshadaha u badan ee goobaha lulataaye ilaa OnlyFans'soo -galitaankii ugu dambeeyay ee si guul leh u soo galay warshadaha - ayaa mararka qaar lagu canbaareeyaa xoogagga dibedda sida soo -saareyaasha lacag -bixinta ama kuwa martigaliya webka, cabsida mararka qaarkood wax yar ma aysan qaban si ay u cabudhiso warshadaha sii kordhaya.
Ugu badnaan, dib-u-dhacyadan waxay dhaliyeen xoogaa isbeddel hab-dhaqan ah oo yar-yar. Ka dib markii lagu eedeeyey inay sii kordhisay sawirrada qaawan ee carruurta iyo fiidiyowyada kufsiga sannadkii hore, Pornhub waxay cusboonaysiisay siyaasaddeeda, oo u oggolaanaysa kaliya la -hawlgalayaasha la hubiyay oo la xaqiijiyay inay soo dhejiyaan waxyaabaha.
KaliyaFans waxay umuuqdeen inay qarka u saaran yihiin dabar -goyn bishii hore maadaama ay ku dhawaaqday in waxyaabaha kufsiga laga rabo ay tahay in si cad loo marsiiyo si looga fogaado in liiska madow lagu daro hawl -wadeennada lacag -bixinta. Goobtu, si kastaba ha ahaatee, waxay dib u rogtay koorsadii maalmo gudahood, iyadoo ku dhawaaqday inay “hakin doonto” isbeddelka siyaasadda, taasoo horseedaysa taaha baahsan ee ka -faa'iideystayaasha maaddada ka sameeya lacagtooda iibinta khiyaaliga goobta iyo macaamiisha.